हामी कहिलेसम्म अविवाहित बस्ने - Current Nepal News
#एन्जल लामा #ब्लुडायमण्डसोसाइटी | 867 Views | Published Date : 23rd July 2018 |
काठमाडौंकी एन्जल लामा बोल्ड र ब्युटिफुल छिन्। १९ वर्षमा पाइला टेकेकी लामा केटाका रूपमा जन्मिइन्, तर उनमा महिलाको स्वभाव र व्यवहार विकसित हुँदै गयो । साढे दुई वर्षअघि तेस्रोलिंगी महिलाका रूपमा खुलेर आउनुअघि समाजका अनेक लान्छना सहँदै, संघर्ष गर्दै अघि बढेकी लामासँग बलियो आत्मविश्वास छ। उनी सफल वकिल बन्न चाहन्छिन्। राजनीतिमा रुचि राख्ने एन्जल उमेरभन्दा परिपक्व देखिन्छिन्। ब्लु डायमण्ड सोसाइटीसँग आबद्ध एन्जललेसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप स:
मिस पिंक–२०१८ को उपाधि हात पर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो ?
समाज तथा घर–परिवारसँग लडेर यो स्टेजसम्म आउने सबै तेस्रोलिंगी मिस पिंक हुन् । सबैले एवार्ड पाएजस्तै हो । म एकदमै खुसी छु— मेरो प्रस्तुतिलाई मूल्यांकन गरेर उपाधि प्रदान गरिएकोमा । थप जिम्मेवारी पाएको महसुस भएको छ । अब नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मिस इन्टरनेसनल क्विनमा भाग लिन थाइल्यान्ड जाँदैछु ।
एवार्ड हात पार्दा सबैभन्दा पहिले कसलाई सम्झनुभयो ?
मैले मेरो हुनेवाला जीवनसाथीलाई सम्झिएँ, जो त्यही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले यसो फर्केर हेर्दा उहाँलाई छेउमै पाएँ। उहाँकै अनुहारमा मेरो आँखा गयो। मैले जितें है भन्ने भावले हेर्दाको त्यो खुसी व्यक्त गर्न सक्दिनँ। एकदमै खुसीका साथ हेरिरहें । मेरी आमा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो । मामुलाई मैले बोलाएकी थिएँ । उहाँ केही बोल्नै सक्नु भएन। शब्दविहीन हुनुभयो। भाबुक बन्नुभयो र ट्वाल्ल पर्नुभयो ।
तपाईले संकेत गर्नुभएको उहाँका बारेमा अलिकति खुलाउन मिल्छ ?
उहाँको नाम सौरभ श्रेष्ठ हो। मेरो बाहिरी रूप नहेरी भित्री मनदेखि नै मलाई माया गर्नुहुन्छ,मलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। म साढे २ वर्षदेखि उहाँसँगको सम्बन्धमा छु । समाज र परिवारका अनेक बाधा, व्यवधानबीच उहाँले मलाई साथ र सहयोग दिनुभयो। दुस्खका हरेक पलमा उहाँ मेरै साथमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको तयारी सुरु भएदेखि नै उहाँले मलाई हौसला दिइरहनुभएको थियो । नजिते पनि यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रतियोगीमा छानिनु नै ठूलो कुरा हो भनेर ढाडस दिइरहनुहुन्थ्यो ।
तपाईंहरूको पहिलो भेट सम्झनुहुन्छ ?
एउटा फेसन शोमा हाम्रो भेट भएको थियो। उहाँको साथी मोडल हुनुहुन्थ्यो। मेरो साथी पनि मोडल थियो। हामी नजिकै थियौं। एकै नजरमा माया बस्यो । हाम्रा निर्दोष आँखाहरू जुझे। हेराहेर भैरह्यो। मलाई उहाँको बोली, हिँडाइ, मुस्कान सबै मन पर्‍यो। मन पर्ने मान्छेको सबै कुरा मन पर्दो रहेछ । दुई हप्तापछि फेरि साथीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा हाम्रो दोस्रो भेट भयो । त्यसबीच अलिअलि बोलचाल अनि फोन नम्बर साटासाट भयो।
सौरभले तपाईंको कुन कुराको प्रशंसा गर्नुहुन्छ ?
मेरो मुस्कान र ओठको । तिम्रो मुस्कानमा चार्म छ भन्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई उहाँको कुन पक्ष मनपर्छ ?
जुनबेला उहाँलाई देखें। वाउ १ मेरो हुनेवाला श्रीमान् यस्तै भैदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। टक्क हेरें, गुणैगुणले भरिएको, कुनै अवगुण देखिनँ । भविष्यमा मेरा लागि यही व्यक्ति सही हुन्छ जस्तो लाग्यो । मलाई हरेक कुरामा उहाँ पर्फेक्ट लाग्नुहुन्छ। म तेस्रोलिंगी महिला भए पनि उहाँ भित्रैदेखि मलाई माया गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, हरेक कुरामा साथ दिनुहुन्छ ।
तपाईंहरूबीचको सम्बन्धलाई घरमा स्वीकार गरिन्छ त ?
हाम्रो सम्बन्धलाई घरमा शतप्रतिशत स्वीकार गरिएको छ। मेरी र उहाँकी आमाले हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। उहाँहरू दुवै जना मिस पिंकको कार्यक्रममा उपस्थित पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो जितमा उहाँकी आमा एकदमै खुसी भएको पाएँ— आँखाबाट पनि खुसी, मनबाट पनि खुसी । उहाँले आफ्नै सन्तानको जितजस्तै मान्नुभयो। मसँग तस्बिर खिचाउन पनि आउनुभयो। मेरो प्रगतिमा कोही यसरी खुसी हुनु मेरा लागी थप खुसीको कुरा हो ।
विवाह कहिले गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
आफ्नो खुट्टामा उभिने भैसकेपछि गर्छु, तर कानुनले अवरोध गरेको छ ।
कानुनले कसरी अवरोध पुर्‍यायो ?
अदालतले सँगै बस्न अनुमति दिए पनि समलिंगी, तेस्रोलिंगीसँगको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन। धारा १२, १४ र ४२ मा अधिकारको कुरा त उल्लेख छ, तर त्यो लागू भएको पाइँदैन। कानुन र यो समाजसँग मेरो गुनासो छ । हाम्रो अगाडि प्रशंसा गरे पनि पछाडि अपहेलना गरिन्छ। मानसिक यातना दिइन्छ। यस्तो कुराले मन दुख्छ। हामी पनि विवाह गरेर सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छौं ।
आफ्ना सन्तानका रूपमा छोरा वा छोरी के पाउने आशा छ ?
म सन्तान जन्माउन त सक्दिन । हामीले धर्मपुत्र वा पुत्री ग्रहण गर्नुपर्छ। छोरा–छोरी जे भए पनि समाजका लागि राम्रो व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छु । लिंगलाई होइन स्वभाव र कर्मलाई बढी प्राथमिकता दिन चाहन्छु ।
तपाईं भर्खर १९ वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ । चाँडै प्रेममा पर्नुभएछ हैन ?
प्रेममा उमेरको कुनै सीमा हुँदैन । न त यसमा लिंगले नै फरक पार्छ । यही उमेरमा माया बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । जीवनसाथी अघि वा पछि जहिले पनि फेला पार्न सकिन्छ । कसैले साथ दिन्छ, दिँदैन त्यो त आपसि समझदारी र बुझाइमा भर पर्छ ।
तपाईंको नजरमा प्रेम के हो ?
प्रेम दुई व्यक्तिबीचको पवित्र सम्बन्ध हो । प्रेममै यो संसार अडिएको छ । माया नै नभएको भए यो संसार रोबोटजस्तो हुन्थ्यो । प्रेम नै बाँच्ने आधार हो ।
विवाहलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
विवाह एउटा पवित्र सम्बन्ध हो । एक–अर्कालाई साथ दिने बाचा, बन्धन यसमा जोडिन्छ ।
तपाईं समाजमा खुलेर आउनुभएको साढे दुई वर्ष भयो । त्यसअघि के कस्ता समस्या झेल्नुपर्‍यो ?
तेस्रोलिंगी महिलाको सन्दर्भमा पुरुष भएर जन्मिए पनि सोचाइ, हिंडाइ, लवाइखवाइ महिलाको जस्तो हुन्छ । म किन खुलेर आइन भने मलाई पहिले यस विषयमा केही थाहा थिएन । म भित्रभित्रै आफैंसँग लडिरहेको थिए । म केटा भएर पनि किन केटाप्रति नै आकर्षित भैरहेको छु जस्तो लाग्थ्यो । मलाई लैंगिक पहिचानका बारेमा उति थाहा थिएन । ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको सम्पर्कमा पुगेंपछि केही कुरा जान्ने मौका पाएँ । हामी पनि महिलाको पहिरनमा हिंड्न सक्छौं भन्ने कुरा थाहा पाइयो । भित्रभित्रै थुप्रै समस्या बोकेर बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । मानिसहरू मेरो हिँडाइ, बोलाइ आदिप्रति गुनासो गरिरहन्थे । स्कुलमा शिक्षकले त्यो केटी जस्तो केटालाई बोलाऊ त भनेर जिस्क्याउँथे । म एकदमै डिप्रेसनमा परें । मलाई देखेर विद्यार्थी, शिक्षक सबै हाँस्थे । म आमालाई पनि भन्न सक्दिनथें । यही कारणले मेरी आमा र बुबा पनि अलग हुनुभयो । आमालाई अझ बढी तनाव नहोस् भनेर मैले सहेर बसें ।
किन पहिल्यै खुलेर आउन सक्नुभएन ?
एकै पटक खुलेर आउन गार्‍हो थियो। आफ्नो कुरा कसलाई सुनाउने रु बुझिदिने कोही थिएनन् । साढे २ वर्षअघि म ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको सम्पर्क पुगें । त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले परामर्श दिनुभयो । त्यसपछि क्रमशस् सहज हँुदै गयो अनि म बिस्तारै खुल्दै गएँ ।
आफू तेस्रोलिंगी भएको कहिले थाहा पाउनुभयो ?
जब हिँड्न थालें, स्कुल जान थालें, मनैदेखि म अरूभन्दा भिन्न छु भन्ने लाग्थ्यो । साढे २ वर्षअघि जब म ब्लु डायमण्डको सम्पर्कमा पुगें, तब थाहा भयो म जस्ता व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी भनिदो रहेछ । म दुई–तीन वर्षको छँदा कुर्ताको सलको सारी बनाएर लगाउँथे रे । लिपिस्टिक लगाएर हिँड्थें । भाँडाकुटी र पुतली खेल्न मन लाग्थ्यो । म केटी नै हँ जस्तो महसुस हुन्थ्यो । कक्षामा पनि केटाहरूभन्दा केटीहरूसँग कुरा मिल्थ्यो ।
आफू पुरुष नै भैदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेन ?
कहिल्यै लागेन । यदि पुरुष भैदिएको भए मैले यति प्रगति गर्ने थिइनँ । घरमै हुन्थें होला । विवाह गर्थें हुँदा । यो उपाधि पनि जित्ने थिइनँ । म जे छु, जस्तो छु त्यसमै गर्व छ ।
तपाईंको परिवारमा को–को हुनुहुन्छ ?
मेरो बुबा, आमा हुनुहुन्छ । आमाले सानो होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । म परिवारको एक्लो सन्तान हँु ।
आफ्नो अध्ययन कहाँ पुर्‍याउनुभयो ?
मैले ललितपुरको पवनप्रकृति स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरें । त्यसपछि कलेज भर्ना भएँ, तर ११ कक्षा पढ्दा–पढ्दै बीचैमा छोडिदिएँ ।
किन बीचैमा पढाइ छोड्नुभयो ?
मलाई गार्‍हो भयो । परिवार र कलेजबाट सोचेजस्तो सहायता मिलेन । बाध्य भएर मैले पढाइ छोड्नुपर्‍यो । म पढाइलाई फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छु र कानुन पढेर सफल वकिल बन्ने इच्छा छ । यसलाई जसरी पनि पूरा गर्छु ।
हिजोआज तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ?
मिस पिंक–२०१८ को उपाधि जितेपछि दौडधुप बढेको छ । जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । हरेकजसो कार्यक्रममा सक्रियताका साथ सहभागी भैरहेकी छु । लुकेर बसेका समलिंगी, तेस्रोलिंगी समुदायका साथीहरूलाई हौसला दिन, सचेतना ल्याउन भूमिका खेलिरहेकी छु ।
थाइल्यान्ड पनि घुम्नुभयो । पासपोर्टका कारण कुनै समस्या भोग्नुपर्‍यो कि ?
मेरो नागरिकता र पासपोर्टमा सबिन लामा लेखिएको छ । त्यसमा पहिलेको तस्बिर राखिएको छ। थाइल्यान्डको एयरपोर्टमा त मैले कुनै समस्या भोग्नु परेन, तर हाम्रै देशको इमिग्रेसनमा बढी नै केरकार भयो। तपाईंको पासपोर्टको तस्बिर र अहिलेको अनुहार मिल्दै मिलेन। यो त अर्कैको पासपोर्ट हो भनेर दुस्ख दिइयो । नागरिकता र पासपोर्टमा लिङ्ग लेखिएको ठाउमा मेल, फिमेल र अदर्स लेखेर मात्र पुग्दैन । त्यहाँ वास्तविक नाम पनि लेख्ने व्यबस्था भए सजिलो हुने थियो ।
सरकारले तपाईंको समुदायका लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
समलिंगी, तेस्रोलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्‍यो । हामी कहिलेसम्म अविवाहित बस्ने रु त्यस्तै बनेका कानुनहरू पनि लागू हुुनुपर्छ ।